ချိစ် ဆန်းဒ်ဝှစ်ခ်ျ ( Cheese Sandwich ) ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
ချိစ် ဆန်းဒ်ဝှစ်ခ်ျ ( Cheese Sandwich )
Saturday, February 15, 2014 Taunzalat
ပေါင်မုန်. .......၂ ချပ်
ချိစ်ပြား...........၁ ချပ်(သို.) ၃ချပ်
Cheese Sandwich လုပ်မယ်ဆိုရင်..၃ ချပ်ကအကောင်းဆုံး( အလှဆုံး)
ဖြစ်ပေမယ့်..ပုံမှာပြထားသလို..အညွှန်းကို ၂ ချပ်စာပဲ..ဖော်ပြပါတယ်..။
ပေါင်မုန်. ၃ချပ်..အသုံးပြုလိုသူများပါဝင်ပစ္စည်းကို နောက်ထပ် ၁ဆတိုးပေးပါ။
ကိုဝယ်ပြီး.. ၁ လက်မ အထူလောက်လှီးပါ။
ချိစ်အခဲလိုက်သုံးသူများက..ပေါင်မုန်.နဲ.အရွယ်ညီအလျား ၊အထူ ကိုပေါင်မုန်.
တစ်ဝက်စာလှီးပြီးထည့် ( သို.) Sliced Cheese သုံးပါက ချိစ်ပြား ၃ ချပ်ကို
ပေါင်မုန်. ( ၁) ချပ်ပေါ်တင်...နောက် ၁ချပ်ဖြင့် ဖုံးအုပ်ပြီး...Microwave မှာ
စက္ကန်. ( ၃၀ ) လောက်အပူပေးလိုက်ရင်..ချိစ်တွေက ညောင်စေးကျသလို